IINGCAMANGO EZIPHEZULU ZETATOO ZEMINWE EZINGAMA-75- [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELA] - UHLOBO
Iingcamango eziphezulu zeTatoo zeminwe ezingama-75- [2021 Isikhokelo sokuphefumlela]
Ukusuka kubunzima ukuya kuyilo olulula, iitatoo zeminwe zivula indlela yetalente yokuyila eguqukayo. Nangona, njengoko unokulindela, iminwe yakho engamathambo ingaphezulu nje kwe-inki, zibuhlungu kakhulu ngenxa yeqela leziphelo zemithambo-luvo.
Ewe kunjalo, kukho ukuphela kokubhengeza rhoqo kunye nokunxibelelana ngokunjalo. Nangona kunjalo, ukuba oko akukuthinteli ekufumaneni enye, umculi wakho we tattoo unakho.
Kumaxesha anamhlanje, abanye basabajonga iitatoo zeminwe njengezithintelo zomsebenzi. Elinye ilungu lomzimba wakho awunakukufihla. Oko kuthetha ukuba awuyinki kakhulu, kuya kuthatha ingqwalaselo enzulu ngaphambi kokuzibophelela. Ngaphandle kokuba ufumana umvambo wethambo ukuhlonipha umtshato wakho, unokuba ngaphandle kwethamsanqa xa undwendwela indawo yakho yokubonisa ukuba wenze idinga.
Funda kwigalari yethu yezona zingu-75 zintle zemilo yoyilo lwe-tattoo yamadoda. Kule ngqokelela yamadoda uyakufumana ezona zoyilo zipholileyo kunye nemibono emhlabeni, ukusuka kwiisimboli, ukudibanisa itattoo, ukubhala i-inki emnyama nokunye.
Nkqu nezitayile ezingaqondakaliyo kunye nezobugcisa zenze indlela yazo kwesi sikhokelo samadoda ukupholisa imibono ye tattoo yomnwe.
Bona ngakumbi malunga - Iingcamango eziphezulu ze-101 + zeTatoos zeSandla
1. IiTattoos zeminwe eyandisiweyo
Ezinye zeetattoo zeminwe ezintsonkothileyo kunye neenkcukacha zongezwa kwii-tatoo zeminwe eziqhubeka nokuphakamisa isandla ukwenza umfanekiso omkhulu, onamandla ngakumbi. Ezi tatto zisebenzisa indawo enkulu ngokunyanga iminwe, isithupha kunye nesandla njengeseyile enye eqinileyo endaweni yokwahlula iziqwenga, ukuvumela iziqwenga ezinkulu. Banokubonisa inkuthazo ye tattoo exhaphaza i- i-anatomy ekhethekileyo yesandla , ezinje ngezo zibonisa ulwakhiwo lwamathambo esandla sonke.
2. Iimpawu zoMnwe weTattoos
Imibuzo engama-20 yokubuza intombazana
Enkosi kwisithuba esilinganiselweyo esifumanekayo, kusetyenziswa iindlela ezahlukeneyo ze iisimboli ezincinci ilungele iitatoo zomnwe. Ezi tattoos zincinci azidingi nkcukacha zibanzi, ii-inki ezimhlophe okanye i-shading, efanelekileyo kwindawo encinci kunye nolusu olunzima ekufuneka umculi ahambe ngalo xa esenza umnwe. . Ngaxeshanye, iisimboli ezincinci njengamehlo kunye neemela zenzela iiTattoo ezitsala amehlo kakhulu kule ndawo.
3. IiTattoos zeminwe ye-Nautical
Ukuba ukhe wazibuza ukuba kutheni Imifanekiso yolwandle efana neeankile, iinqanawa, kunye neenkwenkwezi zaselwandle zibaluleke kakhulu, ziyazibuza ukuba akusekho ntoni. Kwakukho ixesha kwimbali apho loo tattoo yomnwe inqwenelekayo yayigcinelwe ngokungqongqo abadlali beesekisi, izaphuli-mthetho, kunye noomatiloshe, abafumana imizimba yabo kubugcisa kumvambo wegumbi elingasemva lebar kwenye indawo.
Ukwamkelwa kwamhlanje okwandisiweyo kwamvambo kuzalwe ngezo ntsuku zokuqala zokwenza umvambo we-niche kwaye, enkosi koomatiloshe becela imifanekiso ebalulekileyo kubo. Imixholo ye-Nautical iseyinxalenye enkulu yoyilo lwe tattoo namhlanje, ngakumbi kwisikolo esidala isitayile saseMelika. Iitattoo zeminwe zasolwandle ezibonisa ngeentambo iiankile, nkqu neenqanawa zingena ngokulula kwiminwe, njengoko kwenza neetatto zebhendi yomtshato eyilelwe ukuphawula uthando olungunaphakade oluneentambo, imixokelelwane, amagwegwe alukiweyo nokunye okunjalo.
4. IiTattoos zeminwe elula
Ukukhetha uhlobo oluchanekileyo lwe tattoo yomnwe kunokuba nzima kunikwa indawo encinci ekufuneka ujongane nayo. Akukho sidingo sokungaphezulu kwezinto ezinzima ukuba awufuni kwaye uyilo olulula lomvambo luhlala lukhetho olufanelekileyo.
Imigca ye-inki eqinileyo, emnyama emnyama zezona zinto zilungileyo zomzimba kule ndlela, nokuba intle okanye iyatyeba ukuba uyilo luyifanele. Isitshixo uyilo olucocekileyo ngaphandle kweenkcukacha ezininzi zangaphandle, ke kulula ukuba itattoo ifundwe kwaye ibethwe ngaphakathi ngokucacileyo kumnwe wangaphakathi okanye kwiqhina.
5. Iingcamango zeTattoo zomnwe
Ukubhala ngapha nangapha kweminwe yenye yezona zinto zintle kakhulu kuyilo lomnwe emhlabeni. Uninzi lwethu luwabonile amagama athi UTHANDO kunye NENZONDLO ebhalwe kwamanye amaqhina kwixesha elidlulileyo kodwa akufuneki uzilinganisele koloyilo lulula.
Nawaphi na amagama abhalwe ngoonobumba abane aya kulunga kodwa kuya kuba njalo nakumagama asibhozo oonobumba kwizandla zozibini nkqu nangaphakathi kwezandla zakho. Uhlobo lweskripthi lunokuba yinto elula, ebhaliweyo yokubhala ngqindilili, kwiibhloko ezinobumba ukuya kwinto entle ngakumbi.
6. IiTattoos zeminwe yesilwanyana
Umceli mngeni we tattoo yomnwe ulingana nenani elifanelekileyo leenkcukacha kwindawo encinci ukuyenza ifundeke. Olunye lwezona zicelo zimnandi kakhulu lubandakanya uyilo lwenkomo olubonisa isakhono sobugcisa sokwenza umfanekiso wesilwanyana ocacileyo kwaye ufundeke kububanzi bomnwe kuphela.
Xa ungafuni ukuzibophelela kwimifanekiso emikhulu yezilwanyana, okanye awunayo iarhente yendawo yokuhlala eshiye i-inki, olu lukhetho olukhulu. Kuthatha umzobi ngenqanaba lokuzithemba emsebenzini wabo womgca ukuqinisekisa ukuba umfanekiso awubonakali kwaye ujongeke ungathandekiyo.
7. Ukhakhayi lweTattoo yomnwe omncinci
Ukhakhayi kudala lube ngumfanekiso othandwayo kuzo zonke iivenkile ze tattoo. Iitattoo zomnwe wokakayi yenye yeendlela ezimnandi nezizodwa zokuzisebenzisa. Ngokungafaniyo nomgangatho iiTattoos inkcukacha apha kufuneka zithintelwe kuba indawo incinci.
Umzobi onobuchule kufuneka alinganise uyilo phakathi kokulula kunye neenkcukacha ezigqithileyo ukuze abethe loo ndawo imnandi apho umfanekiso ucacile kwaye uyabonakala ngaphandle kokukhangeleka ungcolile okanye usebenze ngaphezulu.
8. IiTattoos zeminwe yobuChule
Uyilo lwetattoo ebonisa ukuba ulindelwe luhlala lutsala amehlo, ke itattoo yomnwe ekrelekrele lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ukuqala kakuhle incoko okanye abantu bajonge ezandleni zakho.
Ezi zinto zincinci zoyilo lwe tattoo zilunge ngakumbi xa i-inki ye tattoo isebenzisa ubude bendalo bomnwe okanye ukumila kwesandla kunye nobhontsi njengoko i-tapers kodwa banokusebenzisa uyilo oluhle okanye olungalindelekanga kwindawo encinci ukuba ibonakale.
9. Imiqondo yeTattoo yeminwe esecaleni
Iitattoo zeminwe zakudala zibekwa ngaphambili kwiminwe phakathi kweqhina ngalinye, kodwa unendawo ethe kratya ekhoyo. I tattoo yomnwe osecaleni inikezela ngolunye uhlobo lokuzonwabisa oluqhelekileyo kwaye inokubakho ukusuka kwisicatshulwa esilula, ukuya kwitatoo yesizwe, okanye iisimboli zokuzonwabisa ezinje ngetolo tattoo, ulungelelwaniso lwamadevu omgca, okanye umvambo wentsiba olingana nesithuba. Ezi tatto zixhomekeke ekunxibeni okuninzi kwaye isicelo asinakukonwaba, ke uyilo olulula kakhulu, olucocekileyo kuhlala lukhetho lwakho.
ukutyibilika komthi ezindongeni ngemibono
Ii-FAQ zeTattoo zeminwe
Ngaba ziitatoo zeminwe luluvo olulungileyo?
Ngenxa yokuba iminwe ingamalungu asebenzayo omzimba womntu, iiTatoo zeminwe azisoloko zisebenza ngokufanayo neeTatto ezikwezinye iindawo. Banokuba fuzzier kwaye umbala obekwe kuzo awuyi kubonisa ngokuqaqambileyo kulowo unxibileyo. Oko akuthethi ukuba licebo elibi ukufumana itattoo ngomnwe kuthetha nje ukuba kufuneka uqaphele iingxaki kwaye uzicwangcise. Eyona tattoos ilungileyo yomnwe ibethelelwe ngaphakathi kwaye imnyama eqinileyo ukunciphisa ukubuna, smudging, kunye nokungabikho komthetho.
Ngaba iiTattoo zomnwe zihlala?
Ngenxa yokusebenzisa kwakho izandla kunye nokuxinana kwesikhumba somnwe, i-tat yomnwe iphantsi kokuphela kwinqanaba elinokukhawuleza kunento efana noyilo lwasemva lwe tattoo. Oku kunokuncitshiswa ngokunciphisa umda wombala wakho kumnyama nje, kunye negcisa lakho le tattoo usebenzisa umgca otyebileyo, oqinileyo. Yazi ukuba nokuba kunjani na, itattoo yomnwe ayizukuqaqamba ixesha elide njenge tattoo ebekwe kwenye indawo.
Ngaba uyayithanda le mizekelo yeetatoo zeminwe? Jonga amakhonkco angezantsi ukufumana ezinye iigalari zokuphefumlelwa kwe tattoo:
Iingcamango eziphezulu ze-75 zeTattoo
Uyilo oluphezulu lweTatoo yeZandla ezingama-71
Iingcamango eziphezulu ze-101 ze-Knuckle Tattoo
Iingcamango ezingama-63 zeTattoo Heart
Iingcamango eziphezulu ze-47 zoTolo lweTatoo
IiTattoos zeBhendi yoMtshato eziPhambili ezingama-59
imibuzo enzulu ukubuza intombazana
Iitattoo zamadoda ngesandla ngamagama
I tattoo emnyama emnyama nengwevu
izimvo zomgangatho ngomngxuma womlilo
I-chrysanthemum tattoo emnyama namhlophe
Izimvo zokunxiba ekhaya zabafana